Ethernity CLOUD: Open Source Cloud Computing Network | ဖြစ်သည် Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 18/09/2021 06:00 | applications များ, NOTICIAS
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကိုစူးစမ်းကြည့်မည် DeFi စီမံကိန်း (Decentralized Finance: Open Source Financial Ecosystem) ဟုလူသိများသည် "Ethernity တိမ်တိုက်".
"Ethernity တိမ်တိုက်" ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်ကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစားသည် cloud တွက်ချက်မှုပလက်ဖောင်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဦး တည်နေပါတယ် privacy, အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုမရ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တတ်နိုင်သမျှအခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုတတ်နိုင်သမျှသုံးပါ open source ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နည်းပညာများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ.
ထုံးစံအတိုင်းပဲ၊ ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုအပြည့်အ ၀ မသွားခင်ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးယခင်အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုထားခဲ့မယ် ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ DeFi (Decentralized Finance: Open Source Financial Ecosystem)၎င်းတို့အားအောက်ပါလင့်ခ်များ ထို့ကြောင့်ဤစာစောင်ကိုဖတ်ပြီးသူတို့လိုအပ်လျှင်လျင်မြန်စွာကလစ်နိုင်စေရန်
1 Ethernity CLOUD: privacy နှင့်အမည်ဝှက်ဖြင့် cloud တွက်ချက်ခြင်း
1.1 Ethernity CLOUD ဆိုတာဘာလဲ။
Ethernity CLOUD: privacy နှင့်အမည်ဝှက်ဖြင့် cloud တွက်ချက်ခြင်း
Ethernity CLOUD ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် de "Ethernity တိမ်တိုက်"၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"လွတ်လပ်မှု၊ အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုတို့အတွက်တည်ဆောက်ထားသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော cloud computing platform တိမ်၏အနာဂတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်တွင်အသွင်ဝှက်ခြင်း၊ အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်မှုတို့၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလက္ခဏာသုံးရပ်ရှိသည်။ blockchain နည်းပညာကို အသုံးချ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပုံမှန် cloud software ကို decentralized cloud applications များအဖြစ်လည်ပတ်စေနိုင်သော decentralized ecosystem တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ Ethernity CLOUD အတွင်း၌ nodes များသည်တည်နေရာမဲ့ဘာသာမဲ့များ၊ အလိုအလျောက်ပုံတူပွားပြီး Ethereum-compliant smart contract တွင်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲအဆက်မပြတ်ပေါက်ဖွားသည်။"
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်၊ "Ethernity တိမ်တိုက်" လုံခြုံမှုမြင့်မားခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောဒေတာလျို့ဝှက်ချက်နှင့်ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားနိုင်မှုကိုကတိပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အမွေအနှစ် cloud computing ကွန်ယက်များနှင့်အတူရှိနေသောပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်တိုးတက်စေရန် blockchain နည်းပညာကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ရည်ရွယ်ထားသော၎င်း၏အမျိုးအစားအနည်းငယ်ရှိသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည် network တက်ရောက်သူများအားအနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် passive ၀ င်ငွေရရှိရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောယန္တရားကိုပေးသည်။
ဒီအတွက် developer များ DeFi စီမံကိန်း cloud computing platform တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ရှာပါ။
ကိုအခြေခံထားပါတယ် blockchain နှင့် open source နည်းပညာများ.
ဝေငှပါ ကျချိန် လက်တွေ့မကျ၊ မပြောင်းလဲနိုင်သော Ethereum ကွန်ယက်နှင့်၎င်း၏လိုက်ဖက်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
တစ်ဦးကိုမြဲမြံစေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ် ကွန်ယက်တွင်ပါဝင်သူများသည်၎င်းတို့၏အသုံးမပြုသော hardware များကိုလိုအပ်သူများအားငှားရမ်းခြင်းဖြင့်တည်ငြိမ်ပြီးသိသိသာသာ ၀ င်ငွေရရှိနိုင်သည် cloud တွက်ချက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု.
ဖောက်သည်များ: cloud computing ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံသော platform ကိုရှာဖွေနေသူများ။
ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်: သူတို့၏ hardware ကို Ethernity platform သို့ငှားရမ်းနိုင်သူများ
ဒီအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Open source ပံ့ပိုးထားသော DeFi project သင်အောက်ပါစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ် link ကို နှင့်၎င်း၏ website မှာ GitHub.
ဆန္ဒရှိတာနဲ့ ပိုမိုလေ့လာ နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများပေါ်တွင် Cloud Computing နှင့် Decentralized Applications များ ဤအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောအောက်ပါယခင်စာများကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
တိုတိုပြောရရင် "Ethernity တိမ်တိုက်" တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် DeFi စီမံကိန်း များစွာရှိနေပြီးနေ့စဉ်နှင့်အမျှပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှုကိုထင်ရှားစေတယ် နည်းပညာဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည် နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ ဟာ့ဒ်ဝဲကိုငွေရှာပါ cloud ပေါ်တွင်လက်ကျန် (သို့) မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသည်။ ဒါ့အပြင်အောင်မြင်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ် ကြားခံအခန်းကဏ္ကိုဖယ်ရှားပါ သမားရိုးကျ cloud computing ကုမ္ပဏီများကလုပ်ဆောင်သည်။ ဒါမှပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာပါ ဒေတာ၏လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အချုပ်အခြာအာဏာကိုအာမခံသည် ၎င်း၏သုံးစွဲသူအခြေခံသို့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Ethernity CLOUD: Open Source Cloud Computing Network ဖြစ်သည်